» पत्रपत्रिकामा आज :वृद्धभत्ता माग्न गएका जिउँदो व्यक्तिलाई मृत्युको प्रमाणपत्र !
२०७६ माघ ०७, मङ्गलबार
५ श्रावण २०७६, आईतवार ०८:०५
५ साउन, नवलपुर । जिउँदो व्यक्तिलाई मृत्युको प्रमाणपत्र ! सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । तर दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिकामा यस्तै भएको छ ।
वृद्धभत्ता लिन पुगेका मनिराम खत्री र उनकी श्रीमती ज्योतिकला खत्रीलाई गाउँपालिकाले नै मृत्यु भइसकेको भन्दै प्रमाणपत्र थमाएको छ ।
खत्री परिवार केही महिनाअघि बर्दिया बसाइँ सरेको थियो । बसाइ सराइँको प्रमाणपत्र नलिएका कारण उनीहरु वृद्धभत्ता बुझ्न दैलेख पुगेका थिए । गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर बुढाले मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रमा रुजु गरेका छन् ।
तर उनको अन्यत्रै सरुवा भइसकेको छ। ‘गत मंसिरमा हाम्रो परिवार बसाइँ सरी बाँसगढी आएको थियो,’ पीडितकी छोरी नानकला अधिकारीले भनिन्, ‘वृद्धभत्ता मिलाइदिन भनेर बाआमाले गाउँपालिकामा कागजात पेस गर्नुभएको थियो । तर बाआमा वृद्धभत्ता बुझ्न जाँदा त गाउँपालिकाले उल्टै दुवै जनाको मृत्यु भएको प्रमाणपत्र पो थमायो ।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित छ
रिसोर्टमा अचेत भेटिएका ८ जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु
अमेरिकी दूतावासनजिकै ३ वटा रकेट आक्रमण
सभामुखका पदका लागि अग्नि सापकोटाको उम्मेदवारी दर्ता
बागमती प्रदेशभर विद्युतीय बस सञ्चालनको योजना बन्दै
चरेससहित एक वडा सदस्य पक्राउ
सप्तरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्षको मृत्यु
पश्चिमी वायु प्रणाली विकसित भएकाले फेरी वर्षा र हिमपातको सम्भावना
मिडिया विधेयकबाट दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने सहमति
सभामुखको उम्मेदवार टुंग्याउन कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
सभामुख चयनका लागि प्रक्रिया सुरु, आज मनोनयन दर्ता हुँदै
सम्झौताको समयसीमा आज सकिँदै, उखु किसानले पाएनन् भुक्तानी